lahatsary amin’ny chat roulette
Ny lahatsary amin’ny chat dia an-tserasera ny asa fanompoana izay mamela anao hifandray amin’ny olona avy amin’ny tanàna samihafa ary na dia ny kaontinanta.
Ankehitriny, ireo izay te-hifandray tsy ilaina ny karazana, tahaka ny any amin’ny toerana, ary manomboka mifampiresaka amin’ny fotoana rehetra (ny vavahadin-miasa manodidina ny famantaranandro).
Inona ianao no mila mifandray amin’ny alalan’ny lahatsary amin’ny chat»Roulette».
Ny fidirana amin’ny aterineto (tena mahazatra marin-toerana ny fifandraisana).
Web fakan-tsary (manokana ny fepetra takiana ho an’ny ara-teknika toetra tsy).
Misy fitaovana amin’ny alalan’ny izay afaka mahazo an-tserasera: ny SOLOSAINA, solosaina, sns.
Ny fanompoana dia manome ny olon-drehetra ny aina toerana, mamela anao hifandray misy fe-potoana, mitadiava namana vaovao sy ny mpiara-miasa. Misy mihitsy aza olona mitantana miaraka amin’ny fanampian’ny ity virtoaly, nefa mbola velona ny fifandraisana mba hahita ny fanahy vady, satria ny dingan’ny ny resaka dia afaka foana ny fifanakalozana ny fifandraisana vaovao, raha toa misy faniriana mba jereo manokana.
Ny endri-javatra izany asa fanompoana izany izy isaky ny manolotra anao ny kisendrasendra interlocutor, noho izany ny anarana hoe»Roulette». Izany dia mampitombo ny tombontsoa ao ny namany sary, rehefa avy mihazakazaka ny fikarohana dia afaka hahafantatra amin’ny olona vaovao.
Izay sy izay izany no hatao
Ny valin’ireo fanontaniana ireo, dia ho hitanao afa-tsy ao amin’ny dingana fifandraisana.
Manasongadina ny endri-javatra maro izay manome ireo mpampiasa miaraka amin’ny rosiana amin’ny chat Roulette:
ny tonga lafatra hanasitrana ny fahasorenana — mandeha fotsiny ny asa fanompoana sy ny mahita ny olona;
ny fandalinana niteny teny vahiny mifandray amin’ny vahiny;
fandresena ara-tsaina itambaram-be — ny fifandraisana manampy ny aina;
nahita fanahy vady — raha toa saro-kenatra loatra mba mihaona amin’ny olona, dia manao izany amin’ny alalan’ny Tambajotra.
Ny lahatsary amin’ny chat dia maimaim-poana sy tsy mitaky ny fisoratana anarana. Ka raha vao lasa leo na ny anao fotsiny te-hiresaka amin’ny iray mahaliana ny olona, tsindrio ny»Fikarohana»sy hifandraisana amin’ny olona vaovao. Io endriky ny fifandraisana dia lasa bebe kokoa malaza manerana izao tontolo izao, fa miresaka amin’ny olona amin’ny fomba virtoaly, mbola tsy hanadino ny momba ny tena ny fivoriana miaraka amin’ny namana
← Izao tontolo izao ny amin'ny chat roulette
Lahatsary amin'ny chat room amin'ny ankizivavy maimaim-poana amin'ny aterineto →